Zvinhui pamusoro pemutengo wekutapa kudhindisa china?-Blog-Bhuku Kudhinda China
Isu tiri kuvhurika uye kupora kugadzirwa panguva yeCOVID-19 dambudziko. Isu tichaaprinta uye nekuendesa zvigadzirwa zvako nenguva. Tikugashirei titumire email, waita hako.
Rakaomarara Sabhuku Kudhindisa
Bhodhi Bhuku Kudhinda
Sadhi Yakatemwa Sabhuku
Chinyorwa & Bhuku Rezvinyorwa
Poster & Makadhi Kudhinda
Flyer & Leaflet Kudhinda
Hupenyu Kuongorora System
Pepa rakakurumbira uye pepa uremu
Tsamba YeSoftware Kudhinda
Comic Book Kudhinda
Kofi Tafura Iri Bhuku Kudhinda
Mufananidzo Bhuku Kudhinda
Kurongedza Bhuku Kudhinda
Kubheka Bhuku Kudhinda
Zvinhui pamusoro pemutengo wekutapa kudhindisa china?
nguva: 2020-03-13 Hits: 7
Catalog zvigadzirwa zvekudhinda ndiyo yakajairika mhando yezvidhinda zvigadzirwa mumusika wekudhinda, uye basa racho rakawedzera, iyo inogona kushandiswa kutenda kwevateereri vese, asiwo zveruzhinji nekusimudzira. Saka zvinhu zvipi zvichave nechinetso pamutengo we Catalog anodhinda china?
Hazvina basa kutaura, zvakanyanya iwe zvaunotenga, zvakachipa. Ichi zvakare chimwe chezvinhu zvinosarudzo izvo zvinokanganisa zvakare mutengo wekudhindisa kwekatalog. Iyo yakawanda chigadzirwa iwe unoraira, yakachipa iyo mutengo weyuniti ichave, iyo inochengetedza zvakananga mutengo. Muindasitiri yekudhinda, mutengo wekutanga wemidziyo yekudhindisa wakafanana, Ndokureva kuti mutengo wemubhadharo wakafanana, zvisinei nekuti wakadhinda zvakadii, mutengo wakawanda, zvaunonyanya kudhinda, iyo inodhura mutengo ichave.
2. Kusarudzwa kwepepa rakasiyana rekudhinda
Yakasiyana mitengo yekudhinda mapepa zvakare akasiyana, sekusarudzwa kwezvinhu zvishoma zvakaonda 157gsm zvemutengo wepepa repepa zvakaderera, uye kusarudzwa kwe200gsm yemapepa akaomarara akapeteka mutengo wemusikirwo unodhura.
Iyo yekudhinda michina yakagadzirwa muChina ichiri mudanho rayo rekutanga, uye zvigadzirwa zvakadhindwa nemidziyo inotumirwa zviri nani, kana tichienzanisa nezvigadzirwa zvakadhindwa nevaridzi vekuno vakaita zvekudhinda. Izvi zvakakanganisawo zvakananga mutengo we Catalog anodhinda chinmunhu.
Unoda kuita basa rakanaka mukudhinda kwekatalog, dhizaini yakakosha, saka kana uchida kuverenga yakanakisa kudhinda quotation, inofanira kuisa mutengo wekugadzira mukati mayo. Ehe saizvozvo, kana iwe uine yavo yekugadzira timu yekushandisa dhizaini, inogona kuchengetedza mutengo wekugadzira.
Iko kushandiswa kwemitengo yakasiyana yeink zvakare kwakasiyana, kupisa kupisa, ink inopisa sirivha uye ye ink ink yemutengo wepengo.
Chimwe chezvinhu chinokanganisa kupepetwa kudhindwa kwekatalog uku ndiko kukura. The saizi, inosarudza huwandu hwepepa rinoshandiswa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kudhinda, kugamuchira kushanya: https://www.revprapines.com/. Kana ita musangano chaiwo kuti uone fekitori neyekutengesa@bookprintingchina.com.
Prev Page : hapana
Next Page : Iyo mukana wekusanganisa kudhinda tekinoroji mukatuni kudhinda china
Copyright © 2020 BookPrintingChina.com All rights rights rights made.